​လူလောကထဲကနေ စောစီးစွာ ထွက်ခွာသွားတဲ့ ရေမွန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရဗီဒီယိုလေး ထုတ်ပြလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့် – Cele Zone
June 23, 2021 - by Yuan
ယနေ့ မှာတော့ rock သီချင်းတွေကို အမိုက်စား သီဆိုတတ်တဲ့ Idiots အဖွဲ့ဝင် ရေမွန်တစ်ယောက် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ အရည်အချင်းရှိပြီး ငယ်ရွယ်သူလေးမို့ အားလုံးက နှမြောတသ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ် ။ တစ်ချို့ကလည်း သူရဲ့ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ သီချင်းစာသားလေးတွေကို အမှတ်တရရေးရင်း ဝမ်းနည်းကြောင်းတွေ ဖော်ပြခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် အနုပညာရှင်များစွာကလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းကို အမဲရောင် ပရိုဖိုင်များ ချိန်းကာ ဝမ်းနည်းကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ် ။ လူ့လောကထဲကနေ ရေမွန်တစ်ယောက် ပျောက်ကွယ် သွားပေမယ့်လည်း သူရဲ့ ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အချိန်တိုင်း ရှိနေမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်မိတာ အမှန်ပါပဲ ။
အခုလည်း အုပ်စိုးခန့်က သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာလေးထက်မှာ ရေမွန်နဲ့ အတူ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြလာပါတယ် ။ ပုံရိပ်လေးတွေအပြင် Show ပွဲနောက်က သီဆို မဖျော်ဖြေခင် အမှတ်တရ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့အတူ ” အကိုရေ…. မစောလွန်းဘူးလားဗျာ….ညီကိုအမြဲတမ်းအရင်လို မဆုံးမတော့ဘူးလားဗျာ…ညီတို့အတူတူအမြဲပျော်ပီးစနောက်တာတွေမရတော့ဘူးလားဗျာ အကိုရေ!!! အကို.! Rest In Peace ပါချစ်ဆုံးကိုကြီးရာ …. ” ရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
Previous Article ပူပြင်းလွန်းတဲ့ ဒေသက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွက် အေးချမ်းတဲ့ အလှူလေးတစ်ခု ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ နိုင်းဝမ်းတို့ဇနီးမောင်နှံ
Next Article နာမည်ကြီး Brand တစ်ခုရဲ့ ကြော်ငြာမော်ဒယ်အဖြစ် အလုပ်တွဲလုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ မေမြတ်နိုး